ကျယ်ပြန်.သွားသောအတွေးများ (Different thoughts on different views) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကျယ်ပြန်.သွားသောအတွေးများ (Different thoughts on different views)
ကျယ်ပြန်.သွားသောအတွေးများ (Different thoughts on different views)
Posted by အာဖျံ ကွီး on Dec 17, 2010 in Aha! Jokes, Satire, Copy/Paste, Other - Non Channelized, Society & Lifestyle |0comments
ကြက်ဖက ကြက်မနောက်ကို အသည်းအသန်လိုက်သည်။ ………..
ကံဆိုးစွာပင် ပြေးနေသော ကြက်မကို ကားတစ်စီးဖြတ်တိုက် သွားသည်။ ဒါကိုမြင်သော …
အပျိုကြီးအတွေး – တွေ့လား၊ ကြက်မက ကြက်ဖကိုမကြိုက်လို့ သူ့ ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်သွားတာ။
လူပျိုကြီးအတွေး – ကြက်ဖပေမယ့် အတွေးကောင်းရှာတယ်။ ဟို စကားပုံအတိုင်းပေါ့။ တစ်ရက်ပျော်ချင်ရင် လမ်းပေါ်မှာရှာ၊ တစ်လပျော်ချင် မိန်းမယူ၊ တစ်နှစ်ပျော်ချင် မယားငယ်ထား၊ တစ်သက်လုံး ပျော်ချင် လူပျိုကြီးပဲလုပ်-တဲ့။ အင်း..ကြက်ဖခမျာ တစ်သက်လုံး ပျော်ချင်လို့နဲ့ တူပါတယ်။င်္
ကြက်ဖက ကြက်မနောက်ကို အသည်းအသန်လိုက်သည်။ …………
ကံဆိုးစွာပင် ပြေးလိုက်လာ သော ကြက်ဖကို ကားတိုက်သွား သည်။
အပျိုလေးအတွေး – အင်း- ကြက်မကိုလိုက်ဖို့ကြက်ဖတစ်ကောင် တော့ ထပ်ရှာရဦးမှာပဲ။
အပျိုကြီးအတွေး – ရှေ့မကြည့် နောက်မကြည့်လိုက်တာကိုး။ သေတာတောင်နည်းသေး။
လူပျိုကြီးအတွေး – ဟီဟိ- ဟို ကြက်မတော့ ကြက်ဖမရှိရင် တစ် သက်လုံးနေရခက်ပြီ။င်္
ဗိုလ်မှူးကြီးအတွေး – ကြက်ဖက ကြက်မသေအောင် စနစ်တကျ မဟာဗျူဟာနဲ့ခင်းလုပ်သွားတာ။ တိုက်တဲ့ကားသမားလည်း ငါ့လာတိုက်ဖို့ ကြံစည်လေ့ကျင့်နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းရှာဦးမှ….
ပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွေး – ကြက်မရဲ့ အသည်းအမြစ်နဲ့ ရင်အုပ်သား အထက်ကိုပေးပြီးပေါင်သားအိမ်သယ်မှ။ ခြေရိုး၂ချောင်းတော့ လမ်းထိပ်က စွမ်းအားရှင်ကိုပေးပြီးကြက်ဖကိုပါ သတ်ခိုင်းလိုက်မယ်။
ဒီမိုကရက်အတွေး – ကြက်မကိုတိုက်သွားတဲ့ ကားဒရိုင်ဘာ ကြံ့ဖွတ်ဖြစ်မှာပဲ။ ကြက်မကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သဂြိုဟ်ပေးမှ။ တောက်..သဂြိုဟ်ခကလည်း အစိုးရသောက်သုံးမကျတာနဲ့ မတရားတောင်းမှာ သေချာတယ်..။ ကြက်ဖကိုလည်း ဟိုကောင်တွေ သတ်စားဦးမယ်။ ငါကယ်တင်ဦးမှဖြစ်မှာပါ..။
ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအတွေး – ကြက်တွေမှာ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်လို့အသိဉာဏ်မရှိကြဘူး။ ကိလေသာမီးတွေလောင်မြိုက်ပြီး ဖြစ်နေကြတော့ အသက်ပါပါသွားတယ်။ ရှေးဘ၀က အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်မှာပဲ။ ၀ဋ်ပေါ့။ ကားဆရာလည်း နောင်ဘ၀ ၀ဋ်လည်တော့မှာပဲ။ သြော်.. ကားတွေရှိနေသ၍ သတ္တ၀ါတွေ သေကြဦးမှာပဲ..။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ …..